Ihlalelwe wumsebenzi onzima iPeugeot Landtrek
Fanelesibonge Bengu | March 16, 2022
IMOTO: PEUGEOT LANDTREK
“Nalaba sebekhiqiza amaveni?”
Cishe yiwona mbuzo engiwuthole kakhulu ngesikhathi ngihamba ngePeugoet Landtrek. IPeuegeot idume ngezimoto ezincane kanjalo namaSUV kepha abanye abayazi emavenini.
Kulula ukungazi ngoba yagcina eminyakeni eyedlule ukwenza amaveni ayebizwa nge-403, 404 ne-504.
Umhlabathi uvundile manje njengoba bekhuza ibuya njengoba kwaziwa ukuthi siyazifela ngamaveni.
Naphezu kokuvunda komhlaba kepha basahlalelwe wumsebenzi wokwenza abathengi bakhohlwe yizintandokazi zabo iToyota Hilux, Isuzu D-Max neFord Ranger. Kungenzeka ngoba nayi iGWM P-Series siyayibona yanda emigwaqeni yize kodwa ingadayisi njengalezi engizibale ngenhla.
Ungacishe uthi iP-Series neLandtrak zingomkhaya ngoba kwaPeugeot bayakha ngokubambisana nenkampani yaseChina iChangan Automobile khona kuleliya zwe bese ithunyelwa kuleli.
Ifika ngezinhlobo ezimbili i-Allure 4x2 ne-4Action 4x4 futhi eyokuqala yiyo esihamba ngayo.
Iyabukeka njengoba ine-chrome ezindaweni ezahlukene emzimbeni. InamaLED daytime running lights ayenza igqame uma isemgwaqweni namarimu angu-17 inch.
Ngemuva esikhenkeni kunerabha evikela ukuthi singalimali uma ulayishe impahla futhi kunoseyili owenza ukuthi okulayishile kucashe. Ebusuku, uyakwazi ukukhanyisa ngemuva uma usukhipha impahla.
Ngaphansi kwebhonethi kunenjini engu-1.9 litre turbo enamandla angu-110kW netorque engu-350Nm. Uma uhamba kancane ihamba kahle kepha uma ufuna ukusuka ngamandla, ine-turbo leg eyenza ukuthi unyathele amafutha isuke kancane bese kuthi ngemuva kwemizuzwana kuyima ifaka amandla.
Isebenzisa u-gearbox oyi-6 speed ozishintshayo osebenza kahle nenjini. Umsindo wenjini uzowuzwa ngaphakathi futhi intofontofo noma ungeke uyifanise nezimbangi.
Ikhombise ukoma kudizili ngoba ngo-100km ibidla amalitha angu-10.3 kodwa yinto eyehla uma usuhamba ibanga elide emgwaqweni ovulekile.
Isiteringi sithe ukuthamba kancane nokwenza kube lula uma upaka kepha inkinga ukuthi ijikela kude awukwazi ukuyigoqa eduze.
Ukuphakama kwayo ngo-235mm kwenza umgwaqo uwubone kahle futhi ungabi navalo lokushaya kwayo phansi uma usungena emakhaya.
IPeugeot 404 yakudala
Ngaphakathi uhehwa yitouchscreen infotainment system enkulu. Ungathi isihanjelwe yisikhathi uma uyivula kepha igqama kahle uma uxhuma iselula nge-Apple CarPlay noma iveza ikhamera ngemuva uma uhlehla. Lapho ebingihlukumeza khona yima sengidlala umsakazo ngoba ayiyivezi ngamagama kepha iveza ngezinombolo.
Ine-aircon, amawindi kagesi avuleka wonke, indawo yokuphuza ingalo ngemuva nokunye. Izihlalo zangemuva uyakwazi ukuzigoqa ulayishe impahla.
Ifika ne-warranty yeminyaka emihlanu noma u-100 000km ne-service plan yesikhathi nebanga elifanayo.